Botticelli oo mar kale wax laga waydiiyay Arimo Khuseeyay Ibrahimovic iyo ninka ku soo xiga Ronaldo iyo messi – Daily Som
Botticelli oo mar kale wax laga waydiiyay Arimo Khuseeyay Ibrahimovic iyo ninka ku soo xiga Ronaldo iyo messi
Wararyahankii hore ee Kooxda AC milan Mario Botticelli ayaa ka hadlay arimo dhowr oo la xiriira ku bada Cagta Isaga oo wax laga waydiiyay Arimo ay kamid yihiin xiga ugu wanaagsan Caalamka iyo kuwa kale.
Botticelli ayaa sheegay in Xidiga Sedaxaad ee dunida ugu wanaagsan Marka laga Soo tago Messi iyo Ronaldo uu yahay Suarez oo u ciyaara Kooxda Barcelona, booskaas oo lagu tiriyo wararyahanka Xulk Brzil iyo kooxda Saint Germain ee dalka Fararnsiiska.
Botticelli ayaa sidoo kale sheegay in Suarez uu dhaliyay 40 kii kulan ee ugu ambeeyay 24 Gool kulamdii uu ka soo muuqaday Kooxiidiisa, asiga oo tilmaamay in uu kooxda wax wayn uqabtay.
Waxaa kale oo la waydiiyay in ay isku dhigmaan xidigaha Cavani iyo Ibrahimovic waxa uuna ku jawaabay su’aal aan si sahlan loo fahmi karin edusan Cavani waxa uu dhaliyay Goolal badan ayuu dhliaya labadii sano eel asoo dhaafay lkn ibro kulmo badan ma ciyaarin marlka la isma bar bar dhigi karo labada xidig, Ibraahimvic waa wax kale.
Botticelli oo mar kale wax laga waydiiyay Arimo Khuseeyay Ibrahimovic iyo ninka ku soo xiga Ronaldo iyo messi added by Staff on March 20, 2018